Audionamix အသစ် ADX TRAX Subscription အစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Audionamix ယဇ်နယူး ADX TRAX Subscription စီမံကိန်းများကို
Audionamix ယဇ်နယူး ADX TRAX Subscription စီမံကိန်းများကို
စျေးနှုန်းအခုတော့ Unlimited Separation မိနစ်ပါဝင်သည်
Los Angeles အသံနှင့်ဆာပ: - Audionamix, အသံအရင်းအမြစ်ခွဲခြာအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်၎င်း၏ထူးခြားသော, ဆုရ ADX TRAX ဆော့ဖ်ဝဲသစ်ကိုကြေးပေးသွင်းအစီအစဉ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်, ထိုလျင်မြန်စွာနှစ်ခုက high-quality audio ဖိုင်တွေသို့အပြည့်အဝရောသမမွှေများခွဲခြား။ အသစ်စျေးနှုန်းအသံအထီးကျန်မှုတွေနဲ့ဆာပုဒ်အတွက်အလုပ်သမား-intensive တာဝန်အရှိန်မြှင့်ဘို့ဤအချိန်-saving tool ကိုအသုံးချဖို့အဘို့အလိုလားသူအသံအသိုင်းအဝိုင်းအတော်များများ options များပေးခြင်း, စီမံကိန်းကိုလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးတွေ့ဆုံရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
"ကျနော်တို့က ADX TRAX ဆော့ဖ်ဝဲအစောပိုင်းအသုံးပြုသူများထံမှတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောတုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိနှင့်ထို့ထက် ပို. subscription ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့မိမိတို့တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်ကြပါပြီ," Rick ဆေးလ်ဗား, Audionamix မှာထုတ်လုပ်မှု၏ VP ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာသူ့ရဲ့သို့မဟုတ်အသံခွဲခြာ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သူမ၏ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြီးအကျယ်ယခင်က melodic တူရိယာထဲကနေအသံခွဲထုတ် logged in ဝင်သောနာရီဖြတ်ဖို့ရှာဖွေနေအောင်အနုပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့ဖွစျစေ, ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကိုက်ညီမယ့်အစီအစဉ်ကိုယခုရှိပါတယ်။ "
လစဉ်ငွေပေးချေမှုနှင့်အတူတစ်လ-to-လတစျခုအပြည့်အဝနှစ်နှင့်, ကြီးမားတဲ့ငွေစုမက်လုံးပေးနှင့်အတူနှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်း: စီမံကိန်းကိုတောင်းဆိုချက်များကိုအမျိုးမျိုး fit တစ်ခုအားထုတ်မှုများတွင် Audionamix အသစ်သုံးမျိုး subscription ကိုမော်ဒယ်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်အစီအစဉ်များပါဝင်သည်:
* Unlimited သီးခြားစီ
* Unlimited စီမံကိန်းများ
* အ ADX TRAX Desktop ကို App ကို
ADX TRAX သန့်စင်ပြီး Tools များ၏ * Unlimited အသုံးပြုခြင်း
* ဆိုသံ Volume ကိုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ဆောင်မှု
* စီးပွားဖြစ် Multi-algorithm ထုတ်ယူခြင်း
မြန်နှုန်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့ * တိမ်တိုက်ထုတ်ယူခြင်း
* Unlimited အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှု
Software များနှင့် Separation အယ်လဂိုရီသမ်ရန် * အခမဲ့အပ်ဒိတ်များ
သုတေသနနှစ်ပေါင်းအပေါ်အခြေခံပြီး, Audionamix အတိတ်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအသံစိန်ခေါ်မှုများ၏ကျယ်ပြန့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဂီတ, ရုပ်ရှင်နဲ့ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများကအသုံးပြုခဲ့သည့်တော်လှန်ရေးသမား, မူပိုင်ခွင့် ADX နည်းပညာ, တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ မာစတာမှတ်တမ်းတင်ထံမှ element တွေကိုသီးခြားနဲ့ခွဲထုတ်အတွက် Audionamix ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များ, အင်ဂျင်နီယာများ, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်မူလအစီအစဉ်များဖန်တီးသို့မဟုတ်အသစ်ဝင်ငွေ-generation အခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသော့ဖွင့်ဖို့အနုပညာရှင်တွေအာဏာ။
ADX TRAX လိုလားသူအသံအသိုင်းအဝိုင်း၏လက်၌ကုမ္ပဏီ၏ ADX နည်းပညာတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းတတ်၏။ ဤသည် cloud-based software ကိုကကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး automated အရင်းအမြစ်ခွဲခြာဖြေရှင်းချက်အောင်, အနီးအစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ပုဒ်ခွဲခြား။ အဆိုပါနည်းပညာသည် non-ဖျက်ဆီးသည် ဖြစ်. , WAV နှင့် (32kHz မှတက် 192 bit နဲ့နမူနာနှုန်းထားများအထိ) AIFF ဖိုင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်အဖြစ်မိုနိုနှင့်အစတီရီယိုဖိုင်များကို။ ADX TRAX လည်းဒေါ်အသုံးပြုသူများအကျွမ်းတဝင်ကြောင်းတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလိုလိုသိအညွှန်းနှင့်တည်းဖြတ် tools များပါရှိပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကတိုးတက်မှုစေနဲ့ audio သိပ္ပံများ၏နယ်နိမိတ်တွန်းဆက်လက်" ဆေးလ်ဗားကထပ်ပြောသည်။ "TRAX ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်, ငါတို့သည်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပိုမိုတိုးတက်မှုများနှင့်ပူဇော်သက္ကာဘို့အခွင့်အလမ်းများကိုကြဖို့အရေးကြီးနေသည်။ "
ADX TRAX သာ 10.7 ဖို့ရဲ့ MAC OS ကို 10.9.2 များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်, ပိုင်ဆိုင်သည့်သို့မဟုတ်လိုင်စင်ရအကြောင်းအရာနှင့်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်, သို့မဟုတ်အများပြည်သူ domain မှရရှိသောအကြောင်းအရာနှင့်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများအပါအဝင်မည်သည့်ဥပဒေ, ခြိုးဖောကျဖို့အသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ။
2008 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Audionamix အသံအရင်းအမြစ်ခွဲခြာအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနနှစ်ပေါင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကုမ္ပဏီ၏တော်လှန်ရေး, မူပိုင်ခွင့် ADX နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ရုပ်ရှင်, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ဂီတစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသံဖြေရှင်းချက်ရှေ့ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ မာစတာမှတ်တမ်းတင်ထံမှ element တွေကိုသီးခြားနဲ့ခွဲထုတ်အတွက် Audionamix ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များ, အင်ဂျင်နီယာများ, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အသစ်သောအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးရန်အနုပညာရှင်တွေအာဏာနှင့်ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသော့ဖွင့်။ ADX TRAX မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်င်း၏ပူးတွဲဂီတလမ်းကြောင်းကနေအသံဒြပ်စင်ခွဲထုတ်အလွယ်တကူဖို့ကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာအသုံးချကြောင်းအထူးပြု software ဖြစ်ပါသည်။ တည်ရှိသော Los Angeles မြို့ နှင့်ပဲရစ်, ကုမ္ပဏီရဲ့နည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဟာယပူဇော်သက္ကာအသံစိန်ခေါ်မှုများ၏ကျယ်ပြန့မှဆန်းသစ်ဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.audionamix.com, ဒါမှမဟုတ်သူတို့အပျေါမှာလိုကျနာ Facebook က, တွစ်တာ, YouTube ကို, Vimeoနှင့် LinkedIn တို့.
(Audionamix, ADX နှင့် ADX TRAX Audionamix ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ )
Lisa ကို Muldowney, [အီးမေးလျ protected] / 760.212.4130 တိုက်ရိုက်
Sally Christgau, [အီးမေးလျ protected] / 415.238.2254 တိုက်ရိုက်
အသံဆော့ဖျဝဲ အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ ထောက်ခံတဲ့အသံ Software များ ကြေးပေးသွင်း အသံအထီးကျန်မှုတွေ 2014-04-30
ယခင်: ဒီဇိုင်နာ / အန်နီ Erik Edmondson Filmworkers Nashville ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
နောက်တစ်ခု: ဗီတာမင် Coor အလင်းတစ်ခုရေခဲပြင်ဒမ်းဖန်တီးလိုက်တဲ့